यताउताबाट - Page6of 15 - KHASOKHAS
‘रेस ४’ बाट सलमान आउट !
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले सन् २०१८ मा सेफ अली खानद्वारा स्थापित फिल्म ‘रेस’को सिरिजमा कदम राखे । सलमानको उपस्थितले यो फिल्मलाई खासै फाइदा दिएन । फिल्म सुपरहिट भएन । यद्पी निर्माण टिमले ‘रेस ४’ बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सलमानको उपस्थितिले फाइदा नगरेपछि निर्माण पक्षले ‘रेस ४’मा नराख्ने भएका छन् । उसो त सलमान यतिबेला …
प्रदेश प्रमुख नै कालोसूचीमा !
तीन दशकअघि लिएको ऋण चुक्ता नगरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गभर्नर मोहनराज मल्ल कालोसूचीमा परेको खुलेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडका अनुसार मल्ल समूहले २०४१–०४२ सालमा बैंकबाट लिएको ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी नगरेपछि कालोसूचीमा राखिएको छ । ऋण लिएको तीन वर्षपछिबाट यो समूहले साँवाब्याज केही पनि भुक्तानी नगरेपछि २०४७ कात्तिक ३० देखि कालोसूचीमा …
कोरिया भाषा परीक्षा अनलाइनबाटै !
सन् २०२० देखि कोरिया रोजगारीका लागि दिनुपर्ने भाषा परीक्षा अनलाइनबाटै हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस परीक्षा अनलाइन प्रणालीमार्फत गराउने तयारीमा रहेको ईपीएस शाखाका प्रवक्ता शोभाखर भण्डारीले जानकारी दिए। अचेल कोरियाली भाषा परीक्षा कागजमा लिने चलन छ। ‘अनलाइन भनेर घरमै बसेर दिन मिल्ने भने होइन हामीले परीक्षा केन्द्र तोकिदिएका हुन्छौँ। त्यहाँ …
बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनका बुवा निर्देशक राकेश रोशनलाई घाँटीको क्यान्सर भएको छ । यो कुरा ऋतिक रोशनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गरेका छन् । ऋतिकले मंगलबार इन्स्टाग्राम मार्फत जानकारी सेयर गरेका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘आज बिहानै मैले बुवासँग फोटोको लागि अनुरोध गरे । मलाई थाहा छ उहाँ सर्जरीको दिन पनि जिम गर्न छोड्नुहुने छैन …
बाजुरा गौमुल गाउँपालिका–१ अन्द्राडीमा पहिलो पटक प्रहरी पुग्दा गाउँबासी डराएर लुके । केही महिना अघि आएर बसेको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक हंशराज जोशीको टोलीलाई मदिरा व्यवस्थापन पछिको अवस्था बुझ्नका लागि उक्त गाउँपालिकाले गत सोमबार सुक्ष्म अनुगमनमा अन्द्राडी पठाएकामा स्थानीयवासी डरले लुक्न पुगेका थिए । प्रहरीलाई देखेपछि कोही पनि घरबाट निस्केनन् भने घर बाहिर रहेका …
इस्लाम धर्म र परिवार छाडेर चर्चामा आएकी साउदी अरबकी एक युवतीलाई क्यानडाले शरण दिएको छ। १८ वर्षीया युवती रहफ मोहम्मद अल–कुननलाई क्यानडाले शरण दिएको हो। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आफ्नो देश मानवअधिकारका साथै महिला अधिकारका लागि सँधै सहयोग गर्न तत्पर रहने प्रतिक्रिया दिए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको अपील अनुसार अल–कुननलाई शरण दिन तत्काल स्वीकृति दिएको …
जिल्लाका अधिकांश मासु पसल फोहर र न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी सञ्चालन गरेको पाइएको छ । भक्तपुर नगरपालिका बजार अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोराको नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार व्यासी र कासानक्षेत्रमा गरेको मासु पसल अनुगमनका क्रममा यस्तो भेटिएको हो । यसअघि गरिएको अनुगमनका क्रममा दिइएको निर्देशन भक्तपुर फ्रेस हाउस एण्ड अण्डा सेन्टरले पालना नगरेको पाइएपछि उक्त …
सात वर्षअघि बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रमा चितुवा आतंक सुरु भयो । चितुवाले मानवबस्तीमा पसेर आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीय एक्लै हिँडडुल गर्न डराउन थाले । त्यतिबेला चितुवाले विशालपुर र शर्मालीमा दुई जनाको ज्यान लियो । मानव–चितुवा द्वन्द्वकै कारण त्यस क्षेत्रमा २३ जनाको ज्यान गुमाइसकेको छ भने १२ जना घाइते छन् । एक वर्षयता चितुवा आक्रमणबाट कसैले …
नेपाल आयल निगमले बिहीबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी १०४ रुपैयाँ ५० रुपैयाँको आन्तरिक हवाइ इन्धनको मूल्य ९४ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेको थियो। नेपाल आयल निगमले आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १० रूपैयाँका दरले घटाएको भोलिपल्ट आन्तरिकतर्फको हवाई भाडा पनि घटेको छ । एयरलाइन्स अपरेटर एसोसियशन्स अफ् नेपालको शुक्रबार बसेको बैठकले आन्तरिकतर्फ पुस २९ गतेदेखि …
बढीनन्द, ९ आउँपानीको छाउगोठ स्थानीयले भत्काएका छन् । मंगलबार राति त्यही छाउगोठमा निसानिस्सएर दुई बालक छोरासहित ३५ वर्षीया अम्बा बोहोरालाई मृत्यु भएको थियो । ‘मृतकको परिवारकै सदस्य रहेका वडाध्यक्ष खड्क बोहोरा र गाउँका महिलाहरुले शुक्रबार गोठ भत्काए,’ स्थानीय रिउली बोहरालाई भनिन्, ‘त्यो गोठ १० परिवारका महिलाले प्रयोग गर्थे ।’ गाउँको अरु तीन गोठ भने अहिले …